Archive du 08-avril-2021
Vaksinin’ny coronavirus Hisafidy ny Spoutnik V Rosianina i Madagasikara ?
Nanatitra ny taratasy manendry azy ho masoivoho vaovaon'i Rosia hiasa eto Madagasikara i SEM.Andreev Andrey Vladimirovich,
Fa efa voaozona ve isika e ?
Izay rehetra jerena sy miseho toa miiba avokoa. Sanatrian’ny vava toa mandatsa sy mijoro hamingana antsika ny zava-drehetra.
Lalam-baovao rocade Ny 3 %-n’ireo mponina rava fananana no mbola tsy nahazo onitra
Mbola mahatratra 3 % ny tahan’ireo olona rava trano, tanimbary mbola tsy nahazo onitra avy amin’ny Fitondram-panjakana vokatry
Ntsay Abel Mbola voatazona ho Tale jeneralin’ny Secren S.A.
Nankatoavin’ny filankevi-pitantanan’ny Secren (Société d'Etudes, de Construction et de Réparations Navales)
Fitsaboana covid-19 Mikolay ny mpitsabo, tsy araka intsony e !
Vao andro vitsy izay no niteraka famoizana ain’olona tamina toeram-pitsaboana roa samihafa andraisana mararin’ny Covid-19
Fidirana sy fivoahana an’i Madagasikara Mitohy ny sidina manokan’ny Air France
Mitohy ny fivezivezena mivoaka sy miditra an’i Madagasikara ho an’ny Kaompania Air France noho ny
Fiara fitateram-bahoaka Miverina ho 3 isaky ny laharana ny olona azon’ny minibus entina
Hentitra ny tale jeneralin’ny antokon-draharaha misahana ny fitaterana an-tanety Atoa Reribaky Jeannot omaly raha nanambara ny fepetra noraisin’izy ireo mikasika
Edmond Rakotomalala “Mamotika tanteraka karazana valanaretina maro ny Ed1”
Nalaza tato anatin’ny fotoana fohy ny fanefitra voajanahary nohatsaraina na ny “Remède traditionnel Amelioré” antsoina hoe: